ARAG: Dalka Turkiga oo qaaday Talaabo CAJIIB ah ay ugu hiilinayaan Ozil kaddib markii uu iska Casilay xulka Jarmalka….+SAWIRRO – Gool FM
RASMI: Man United oo heshiis cusub ka saxiixatay mid ka mid ah xiddigaheeda
Muxuu ka yiri Jose Mourinho kaddib markii uu Iker Casillas kubadda cagta ka fariistay?
Chelsea oo qeyb ka soo noqotay raacdada loogu jiro xiddig ka tirsan kooxda Real Madrid
Goorma ayay Kooxda Manchester United dhammaystiraysaa saxiixa Jadon Sancho?
Kooxda Napoli oo weyn karta Lorenzo Insigne kulanka Champions League ee ay wajahayaan Barcelona
Man United oo soo bandhigtay maaliyadda ay xiran doonto marka ay gurigeeda ku ciyaarayso fasal ciyaareedka cusub ee 2020/21.… + SAWIRRO
“Sergio Ramos wuxuu awoodaa inuu ciyaaro illaa inta uu ka gaarayo 40 sano” – Xiddig ay ka wada tirsanaayeen Real Madrid
Halkee ayuu marayaa heshiiskii ay Kooxda Chelsea ku doonaysay Goolhaye Dean Henderson?
Cristiano Ronaldo oo doonayay inuu ka tago Turin & Kooxda uu rabay inuu ku biiro oo daaha laga rogay!
Kooxda Chelsea oo lacag rikoor ah ku soo qaadan karaysa Ben Chilwell… (Meeqa Milyan ayaa laga dalbaday inay miiska saarto Blues?)
ARAG: Dalka Turkiga oo qaaday Talaabo CAJIIB ah ay ugu hiilinayaan Ozil kaddib markii uu iska Casilay xulka Jarmalka….+SAWIRRO
Byare July 24, 2018
(Devrek) 24 Luulyo 2018. Dalka Turkiga ayaa qaaday Talaabo Cajiib ah oo lagu taageerayo Mesut Ozil kaddib markii uu ka dhawaajiyay inuu iska casilay xulka qaranka Jarmalka.
Laacibka Arsenal ayaa sheegay in lagula kacay Isir Faqooq iyo waliba xushmad darro.
Waxyaabaha ugu badan ee loo aaneynayo inuu isku casilay Ozil ayaa ah eedeymihii xooganaa ee kaga yimid Jarmalka kaddib Sawirkii uu la galay Madaxwayanaha Dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Wado loogu magac daray Ozil oo ku taala Degmada Devrek ee Gobolka Zonguldak ee Woqooyiga Turkiga, halkaa ay ka soo jeedaan asalka reerkiisa ayaa laga badelay Sawirkii ku dhaganaa sida uu warinayo Hurriyet Daily News.
Waxaa markii hore Wadada saarnaa Sawirka Ozil oo xiran maaliyada xulka Jarmalka maadaama uu ku hogaamiyay koobkii adduunka ee 2014. Balse iminka waa la badelay Sawirkaa kaddib markii uu si niyad jab leh isaga casilay u ciyaarista Jarmalka.
Waxaa lagu badelay Sawirkii ay iskula jireen Madaxwaynaha Turkiga ee Erdogan.
Duqa Magaalada ee Mustafa Semerci ayaa xaqiijiyay in la badelayo sawirka Ozil uu xirnaa maaliyada xulka Jarmalka isla markaana lagu badelayo midka uu sito Arsenal oo uu la sawiran yahay Recep Tayyip Erdogan.
DEG DEG: Liiska Musharixiinta Abaal marinta Laacibka Sanadka 2018 oo lagu dhawaaqay
Georginio Wijnaldum oo diyaar u ah in kooxdiisa Liverpool uu kala qeyb qaato kulanka Manchester City